चीनले विश्वभर निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने
एजेन्सी – एक चीनियाँ कम्पनीले विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने भएको छ । लिंकश्योर नेटवर्क कम्पनीले जनाएअनुसार विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक चिनीयाँ इन्टरनेट कम्पनीले उपग्रह पठाएको हो । यस कार्यको उद्‌घाटन......
अछाममा देशकै पहिलो सूचना प्रविधि केन्द्रको उदघाटन
अछाम, फागुन २० । देशकै स्थानीय तहको नमूनाका रुपमा साँफेबगर नगरपालिकाको सूचना प्रविधि केन्द्र उदघाटन गरिएको छ । नगरबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाप्रवाहको वारेमा जनतालाई जानकारी दिनको लागि सूचना प्रविधि केन्दको उदघाटन गरिएको हो......
मृत्युको भविष्यवाणी गर्ने प्रणाली बनाएको अनुसन्धानकर्ताको दावी
यदि तपाईलाई कहिले मर्छु भन्ने थाहा भो भने के गर्नुहुन्छ ? मृत्युका बारेमा थाहा पाएपछि कोही आफन्तसँग समय विताउन खोज्ला भने कोही मनले चाहेका कामकुरा पुरा गर्नतिर लाग्ला । तर, मृत्युका विषयमा जान्न गाह्रो......
अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने
काठमाडौँ, ७ पुस । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले विधिको शासनको अवलम्बन गर्ने कानून व्यवसायीलाई संविधान र कानूनको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको ६१आँै दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले......
नापी विभाग नै प्रयोग गर्छ चोरीको सफ्टवेयर
काठमाडौं, असोज ८ । नापी विभागले प्रयोग गर्दै आइरहेको भौगोलिक सूचना प्रणाली ९जिआइएस०सम्बन्धी सफ्टवेयर चोरीको ९पाइरेटेड० भएको पाइएको छ । विभागले ‘इसरी इन्क’ नामक अमेरिकी कम्पनीको ‘आर्क जिआइएस’ सफ्टवेयर अनधिकृत रूपमा महत्वपूर्ण तथ्यांक संकलन......
चीनको इन्टरनेट अव नेपालमा पनि
काठमाडौं असोज ७ । हिमपात र पहिरोका कारण अनिश्चित बनेको चीनबाट इन्टरनेट व्यान्डविथ ल्याउने प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल र चीन दुवैतर्फ अप्टिकल जडान सम्पन्न भएर परीक्षणका क्रममा रहेको र यो......
काठमाडौं, भदौं २२ । नेपालले एक बर्षको अवधिमा कबिर दुइृ खर्ब रुपयिाँ बराबरको इनटरनेट खरिद गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत बर्ष एक अर्ब ९१ करोड ४० लाख......
किन पर्दैन प्राविधिक पदमा दरखास्त ?
काठमाडौँ, २० भदौ । लोकसेवा आयोगबाट खुलाइने विज्ञापनमा सयौँ गुना दरखास्त परे पनि केही विज्ञापनमा भने दरखास्त नै नपर्ने गरेको छ । आव२०७३÷०७४ मा विज्ञापन खुलाइएका ३९ पदमा कुनै पनि दरखास्त नपरेको आयोगले जनाएको......
विधुत प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिए ? ११५१ मा फोन गर्नुस्
काठमाडौँ, भदौ ११ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नोलाइट शाखाले ग्राहकको फोन नउठाउने र गुनासो सम्बोधन नगर्ने पुरानै चलन हो । समय बदलियो, राजनीति बदलियो, मुलुकको व्यवस्था बदलियो तर कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन भएको छैन ।......
काठमाडौं, भदौ १६ । दूरसञ्चारको पहुँच व्यापक विस्तार भइरहँदा इण्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि त्यसैअनुसार बढ्दै गएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार देशभर एक करोड ५५ लाख ५६ हजारले इण्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्।......